२०७५ को एलएलबीको भर्ना अहिले ! – Sourya Online
२०७५ को एलएलबीको भर्ना अहिले !
सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ११ गते ८:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यायलअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसले शैक्षिक सत्र ०७५÷०७८ को लागि स्नातक तह प्रथम वर्र्ष(एलएलबी) को रोकिएको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कोटा तोकेर भर्ना प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएपछि क्याम्पसले भर्ना सुरु गरेको क्याम्पस प्रमुख डा. दिनानाथ पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । करिब आठ महिनापछि पुनः क्याम्पसले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
‘रोकिएको भर्ना प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको र त्यही आदेशलाई टेकेर कार्यकारी परिषद्ले कोटा निर्धारण गरी पत्र पठाएपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको हो’, उनले भने,‘सर्वोच्चको आदेश र कार्यकारीको निर्णयअनुसार यसपटक क्याम्पसले शैक्षिक सत्र ०७५÷०७८ का लागि तीन सय विद्यार्थीमात्र भर्ना गर्ने छौँ ।’
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कात्तिक २४ गते ल क्याम्पसलाई पत्र पठाउँदै तीन सयमा दुई सय ४० खुला र ६० समावेशी कोटामा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो वर्र्ष चैतमा भर्नाका लागि प्रक्रिया थाले पनि विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा ताला लगाउने र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि रोकिएको थियो ।
यसअघि पनि तीन सय कोटा तोकी भर्ना प्रक्रियाका लागि आवेदन फाराम विवरण भइरहेका बेला विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएका थिए । तत्कालीन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै ताला लगाएका थिए ।
गत वर्र्ष चैतमा भर्नाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा करिब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थीले फाराम भरेको क्याम्पस प्रमुख डा. पराजुलीले जानकारी दिए । उनले अघिल्लो वर्र्ष भर्नाका लागि फाराम भरेका विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने बताए । नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि क्याम्पसले मंसिर १० देखि २५ गतेसम्म आवेदन फाराम वितरण गर्ने भएको छ । प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिस्टको आधारमा सबभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्न पाउने छन् ।
पछिल्लो समयमा एलएलबी पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण भएदेखि क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । शैक्षिक सत्र ०७४÷०७७ का लागि पनि क्याम्पसले आठ सय भर्ना गर्ने भने तापनि पछि विद्यार्थी संगठनको दबाबका कारण करिब १० हजार ८ सय विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । अनेरास्ववियुका क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष हरि पंगेनीले कोटा प्रणाली नभई प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने बताए ।